β2-MG Cys-C - Renal Basa
[email inodzivirirwa] Iyo β2-Microglobulin / Cystatin C Reagent Kit inoitirwa kuyera kuwanda β2-microglobulin uye cystatin C muvanhu serum. Kiriniki, inowanzo shandiswa pakubatsira kuongororwa kwezvirwere zveitsvo.
Cys C mucherechedzo wakakodzera wekuratidza hosha dzeitsvo. Cys C yakawandisa iripo mumuviri wemunhu mvura yakaita seropa, cerebrospinal fluid, mate, urume, nezvimwewo Cys C inogona kupfuura nemu glomerular filtration membrane zvakasununguka. Ino reabsorbed ne proximal convoluted tubule uye haichabatike mukutenderera kweropa. Sezvo itsvo tubules dzisingabudise Cys C, shanduko mukusungwa kweCys C muropa inoratidza iyo glomerular firita chiyero, izvo zvinoratidzira mamiriro eiyo renal basa, kusanganisira renal kukuvara.
β2-MG: iyo β2-MG yekumanikidza muropa revarwere vane malignant lymphoma, chisingaperi lymphocytic leukemia, isiri-Hodgkin's lymphoma kana akawanda myeloma nezvimwe zvakakwirira zvakanyanya, uye zvine hukama zvakanyanya nehurwere hwechirwere. Iyo β2-MG yevasungwa muropa revarwere vane uremia, nephritic syndrome uye chakakomba itsvo kutadza zvakare zvakakwirira zvakanyanya.
Kugadziriswa kwemazuva ese hakudiwe